iSishayamthetho sakwaZulu-Natali siqophe umlando sibamba ingqungquthela yokweseka abathandanayo abanobulili obufanayo kanye nabanobulili obufanayo – KZN Legislature
IQALE ngomfutho ingqungquthela yokuqala yesiShayamthetho saKwaZulu-Natali yomkhankaso waso wokuseka abantu abanobulili obuxubile kanye nabathandayo abonobulili obufanayo, abavame ukubizwa ngama-LGBTQIA+.
Lomcimbi, obizwa ngeKwaZulu-Natal Legislature’s LGBTQIA+ Symposium , ubuhanjelwe ngosolwazi, abazikabanzi ngalomkhakha, abamele izinhlangano, ama-LGBTQIA+, abemiNyango kahulumeni ehlukene, omasipala namalungu esiShayamthetho, ubuse-City Hall eMgungundlovu mhla zingama (date).
USomlomo wesiShayamthetho saKwaZulu-Natali uNksz uNontembeko Boyce wethule ingqikithi yalenhlanganiso wagcizelela ngokuthi bazimisele ukuqhubeka nezinye izingqungquthela zalolu hlobo ukuze bezofunda kabanzi ngama-LGBTQIA+, kanye neminye imikhakha engavikelekile, bese bewaseka ngendlela efanele.
“Esikuqondayo kwisiShayamthetho wukuthi ngokoMthethosisekelo wakulelizwe, sonke siyalingana futhi sonke sinamalungelo avikelwe nguSomqulu Wamalungelo Abantu (Bill of Rights). Lawo malungelelo kumele ahlonishwe yiwo wonke umuntu wakuleli,” kusho uSomlomo.
“Yingakho sikubone kumqoka ukuthi sihlangane kulengqungquthela ukuze sizofunda izinto ezithinta ama-LGBTQIA+, siphinde sikwazi ukuyeka lokhu ebesithi siyakwazi ngawo noma sizitshela ukuthi kuyiqiniso ngawo. Ukusebenzisa usiko nenkolo ngendlela engafanele ukubacwasa ngendlela abaphila ngayo, konke lokho yizinto esifisa ukuziyeka. Kodwa inkolo nosiko kumele kusetshenziswe ngendlela efanele yokubaseka, sibakhombise nothando,” kuqhuba uSomlomo.
Wenze isibonelo ngesishoshovu se-LGBTQIA+ uMnuz Lindokuhle Cele waseMlazi, owabulawa ngo-2020 ngesihluku ngenxa yempilo ayiphilayo. Uthe izigameko ezifuze lezi kumele zinqandwe futhi kuliwe nazo.
“Abantu abaningi abathandana nabantu abanobulili obufanayo mabangacwaswa ngendlela abaphila ngayo, bazizwe bengaphephile emphakathini; nokuyinto okumele iphele. Ayemukelekile nhlobo, siyayigxeka kakhulu,” kusho uSomlomo. UMnuz uChris McLachlan, i-Clinical Psychologist esibhedlela e-Edendale, uthe baningi abantu abangaqondi ngempilo yama-LGBTQIA+, nokwenza impilo yawo ibenzima.
“Okokuqala nje uma ingane izalwa, kubhekwa ukuthi wumfana noma yintombazane. Bese-ke ngalokho beyikhethela ukuthi izogqokani nokuthi izoba umuntu onjani emphakathini. Uma kwenzeka kuba khona umuntu ozizwa ngenye indlela abantu bake badideke, abanye bengakwazi ukwamukela.
“Izinto ezifana nezinto ezincane zenza ama-LGBTQIA+ abe nezinselelo njengokuthi asebenzise ziphi izindlu zangasese emphakathini, ngoba emphakathini kukhona ezabesilisa nezabesifazane kuphela ezindaweni eziningi. Wena uma unomzimba womuntu wesilisa kodwa uzizwa ukuthi ungowesifazane, uba nenkinga. Kokunye uze ubone ukuthi kumele ungazisebenzisi nhlobo izindlu zangasese ngoba uyacwaseka. Ezikoleni naseziteshini zamaphoyisa khona abangakutholi ukwesekwa, bacwaseke.”
Uthe njengomuntu obuye esebenze eThuthuzela (lapho kusetshenzwa amacala okudlwengula ezibhedlela) uke abone kukhona nabasaba ukuzobika amacala ngoba besaba ukuthi ngeke benzelwe ubulungiswa noma bahlekwe. “Abanye uma bexoshwa emakhaya, abazi bazoyaphi ngoba nezikhungo ezigcina abantu kunendawo yabesifazane nabesilisa kuphela. Kuningi okusamele kulungiswe ukweseka ama-LGBTQIA+ emphakathini,” kusho uMcLachlan.
Ovela eNdlini yabaHoli boMdabu, Inkosi NC Molefe, uthe uyaqonda ukuthi ezindaweni zasemakhaya nezamakhosi kusekhona ukungemukeleki nokucwaswa kwama-LGBTQIA+ kodwa bafisa ukufundiswa ukuze bezokwenza kangcono. “Siyaqonda ukuthi zikhona izinselelo ezindaweni zasemakhaya, kuba nzima ukuphila nathi emphakathini ngenxa yengcindezi ekhona. Kusenzima ukuthi sibemukele njengabanye abantu. Kokunye asibazi nokuthi bakhona ezindaweni zamakhosi ngoba bazifihlile ngoba besaba ukucwaseka.
“Esikushoyo manje wukuthi abangesabi, abaphumele obala, sibazi. Sazi izidingo zabo. Yizingane zethu lezi, esizithandayo. Kumele kube nezinhlelo ezifuze lezi umphakathi ufundiswe ngama-LGBTQIA+, kungagcinwa emadolobheni, kuyiwe ezindaweni zasemakhaya. Kumele uma ehlukumezekile akwazi ukuyofaka amacala konkosi bebike. Awanganikwa amagama awacwaswayo kodwa anikwe uthando nokusekwa lapho ekhona, angaze abalekele emadolobheni lapho ezokwamukeleka khona,” kusho Inkosi uMolefe.
Omunye obekulengqungquthela wuSamkelo Dindi, oneminyaka ewu-19, waseMkhuze, onxuse ukuthi kube nocwaningo emadolobheni nasemakhaya ukuze kube nolwazwi olulodwa ngomkhakha we LGBQTI+.
“Mina ngaze ngaba neminyaka engu-16 ngingakaze ngimbone omunye umuntu ophila impilo yabathandana nobulili obubodwa. Ngakho nganginemibuzo eminingi ukuthi ngathi ngiwumfana kodwa ngizizwa ngiwumuntu wesifazane. “Ngaba nenkinga nasesikoleni emathoyilethi abafana khona owazama ukungidlwengula. Ngase ngicela ukusebenzisa awamantombazane kodwa babengayizwa kahle leyo. Kwelothisha bathi ngeke besebenzise amathoyilethi nomfundi. Ngagcina nginikwa elalingasetshenziswa umuntu ukuthi kube ngelami. Kuningi ukucwaswa engakuthola ngenxa yempilo engangiyiphila. Ingqungquthela enje eyenziwe yisiShayamthetho iyasilekelela ukuthi sikhulume ngezinselelo esibhekana nazo nsuku zonke. Sifisa iqhubekele phambili nakwenzinye izindawo,” kusho yena.
Ilungu leSishayamthetho uMnuz uMarthinus Meyer lithe njengoba laphumela obala ngokuba owesilisa othandana nobulili obufanayo, kusabikwa ukuthi kukhona abasacwaseka. “Ngizizwa sengathi sizenzela phansi izingane zethu uma zisathola ukucwaseka ezikoleni namanje. Abanye bakhala ngokuthi amakhansela naseziteshini zamaphoyisa bayacwaseka. Lokho kumele kuphele. SiyisiShayamthetho kumele sizibophezele ekufundiseni abaholi emphakathini ukuthi ama-LGBTQIA+ aphathwa kanjani uma enezidingo,” kusho yena.
UMnyango wezeMpilo, uMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu, uMnyango wokuThuthukiswa koMphakathi ithe inezinhlelo eziseka ama-LGBTQIA+ eminyangweni yazo.
UDkt u-Amet Tshabalala, woMnyango wezeMpilo, uthe kuseyinselelo ukuthi izibhedlela nemitholampilo zihlukaniswa ngowesilisa nowesifazane kuphela. Uthe kuningi okunye abazama ukukushintsha ukuze ama-LGBTQIA+ amukeleke kahle kwezempilo.
UNksz uGugu Luthuli, woMnyango wezokuHlaliswa KwaBantu, uthe kukhona uhlelo lwezinhlangano ezingenzi inzuzo, zokubhalisela ukuxhaswa ngendawo yokuhlala bese behlalisa abathandana nobulili obufanayo uma befakwe ngaphansi kwabantu abazohlomula.
Uthe nezindlu zomxhaso bayakwazi ukuzibhalisela uma nje izimo zabo ngokusebenza zivuma ukuthi baxhaswe.
Bathe bayakuqonda ukuthi kulezindawo ezikhoselisa abantu kusenenselelo yokuthi bahlukaniswa ngobulili besifazane nabesilisa. Bathe lokhu ngokunye okusadinga ukulungiswa.
UKhomishana weGender Equality, uNksz Busisiwe Deyl, uthe zisekhona izinselelo ababhekana nazo emsebenzini wokulelwa amalungelo abesifazane nokulingana kwezobulili ezweni. “Phakathi kwezinye izinselelo yimishado yezinkolo ezehlukene namasiko ahlukene. Umsebenzi wethu ukuthi siseke amalungelo abantu, siyakwazi ngisho nokuya ezinkantolo njengoba kwenza ihhovisi loMvikeli woMphakathi uma kukhona okumele sikulelwe ukuze kube semthethweni, ukuze kube nobulungiswa,” kusho yena.
Kulo mcimbi bekulandelwa yonke imithetho yokuphepha kwiCOVID-19, kuqhelelwene, kusetshenziswa nezifonyo ezimibalabala eziseka ama-LGBTQIA+.
Newsletter - 16th EditionApril 13, 2021
Legislature Activities This Week (10-15 May 2021)May 11, 2021
Sitting 02 March 2021
design June 30, 2021